Jitsi Desktop: Fampiharana an-tsary sy lozisialy miantso horonantsary open source. Avy amin'ny Linux
Jitsi Desktop: Fampiharana an-tsary sy lozisialy an-tsary open source
Hatramin'ity taona 2020, efa herintaona izay videoconferences nanjary nalaza noho ny Valan'aretina covid-19 ary ny vokatry ny fitokanana sy fanalavitra ny fiaraha-monina, fampiharana (fampiharana) maro sy sehatra tranonkala vaovao no noforonina nanararaotra ny fipoahana ary ireo efa misy dia nohavaozina sy nalaza, ny iray amin'izy ireo dia Jitsi Desktop.
Tadidio izany Jitsi amin'ny ankapobeny, izy dia andiam- tetikasa loharano misokatra izay manamora ny fampiharana ny vahaolana amin'ny kaonferansa azo antoka, milamina ary mangarahara. Ho tetikasany malaza indrindra, Jitsi videobridge y Jitsi mihaona, izay mifantoka indrindra amin'ny videoconferencing amin'ny Internet, raha, Jitsi Desktop no fomban-drazana sy fototra fampiharana ny mpanjifa (birao) an'ny Tetikasa Jitsi.
Ity lahatsoratra ity dia tsy voalohany, na misy ifandraisany Jitsi, fa hanampy antsika hanomboka manavao ny atiny io. Na izany aza, ho an'ireo izay liana Fampiharana Jitsi na mifandraika amin'ny haitao misy azy ireo, afaka mitsidika azy ireo izy ireo ary mandinika bebe kokoa momba azy ireo. Ary izao no manaraka:
Mattermost 5.25 dia miaraka amin'ny fidirana ho an'ny Jitsi, fanatsarana ho an'ny Welcomebot sy maro hafa
Jitsi 1.0 azo antoka azo ampiasaina!
"Jitsi (SIP Communicator teo aloha) dia kaonferansa video, VoIP, ary fampiharana fandefasan-kafatra ho an'ny Windows, Linux, ary Mac OS X. Izy io dia mifanaraka amin'ny telefaona telefaona malaza sy fandefasana hafatra eo noho eo ary nahatratra ny kinova miorina voalohany andro vitsy lasa izay. Nozaraina tamin'ny fehezan-dalàna momba ny GNU Lesser General Public Licence, Jitsi dia rindrambaiko maimaimpoana." Jitsi 1.0 azo antoka azo ampiasaina!
1 Jitsi Desktop: Mpiantso horonantsary sy fifampiresahana
1.1 Inona ny Desktop Jitsi?
1.3 Fametrahana amin'ny Linux
Jitsi Desktop: Mpiantso horonantsary sy fifampiresahana
Inona ny Desktop Jitsi?
Androany, famaritana marina kokoa sy maoderina momba ny Jitsi Desktop Toy izao manaraka izao:
"Un mpanjifa maimaimpoana, loharano misokatra, multiplatform izay miasa miaraka amin'ny Instant Messaging (IM), resaka am-peo sy horonan-tsary amin'ny Internet. Miara-miasa amin'ny maro amin'ireo protokolan'ny Internet Messaging sy Telephony malaza indrindra izy io, ao anatin'izany ny Jabber / XMPP sy ny SIP Voice over IP (VoIP), sns. Izy io dia miasa miaraka amina encryption tsy miankina fanampiny ho an'ny IM amin'ny alàlan'ny protokol OTR (Off-the-Record) ary ho an'ny fivoriana am-peo sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny ZRTP sy SRTP." Fifandraisana: Sehatra ho an'ny Rafitra fiasa GNU / Linux.
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny tranokala ofisialy, farito ho toy ny fampiharana izay:
Izy io dia ahafahana manao antso an-tsary, kaonferansa, chat, fizarana birao, famindrana rakitra, fanohanana ny rafitra fiasa tianao sy ny tambajotram-pifandraisana eo no ho eo.
Manaova antso an-tsary sy horonan-tsary azo antoka, noho ny rafi-pandrafetana azy amin'ny rafitra roa.
Mizarà ny birao misy ny Rafitra miasa izay apetraka, raha mbola manana mpanjifa XMPP na SIP ilay mpandray manana fahaiza-manaon'ny horonantsary. Ho fanampin'izany, mamela ny mpisera Jitsi hafa hifanerasera amin'ireo fampiharana an'ny mpampiantrano loharano na inona na inona karazana Operating System amin'ny lafiny roa. Ary azonao atao ny manao an'io session io miaraka amin'ny ZRTP.
Araka ny efa nambarantsika teo aloha, dia endrika marobe io, noho izany Jitsi Desktop azo sintonina ary ampiasaina be loatra Windows, Mac OS X na Linux. Ary arakaraka ny fahaizan'ny mpampiasa azy, azo amboarina sy hovitaina mora foana izy io a FreeBSD Distro.
Fametrahana amin'ny Linux
Alohan'ny hametrahana ny Desktop Jitsi, alao antoka fa Rafitra miasa malalaka sy misokatra (GNU / Linux Distro) efa nametraka Java JDK / JRE 8, satria io kinova io ihany no tohanany. Raha izany, ny GNU / Linux Distro manana fonosana toy izany ao amin'ny toerana fitahirizan-tsika ao anatiny, andao fotsiny ity baiko manaraka ity:
Raha Operating System teo aloha dia manana kinova avo kokoa, toa JDK / JRE 11Ataovy izay hamafana azy eo alohan'izay na aorian'izay, hialana amin'ny lesoka, amin'ny alàlan'ny fampiharana ity baiko manaraka ity:
Vantany vao vita io dingana io dia azonao atao apetraho ary tantano ny Jitsi Desktop. Ampidiro ity baiko manaraka ity raha te hametraka ny azo ampiharina ankehitriny sy misy.
Raha sendra maniry apetraho eo amin'ny toerana fitahirizanao izany, araho ny torolàlana nohavaozina omena manaraka rohy. Ary raha mila mampidina fonosana fanampiny toa anao ianao "Jitsi-archive-keyring_1.0.1_all.deb" tsindrio manaraka rohy.
naoty: Raha manapa-kevitra ny hiala ianao OpenJDK na Java 11 napetraka eo akaikin'ny OpenJDK na Java 8, tsarovy ny manamarina ireto baiko manaraka ireto izay Java 8 izany amin'ny alàlan'ny default, fa tsy Java 11:
Ary raha tsy amin'ny alàlan'ny alalana, na amin'ny voalohany na farafaharatsiny izay voalohany, dia ampiharo ireto baiko manaraka ireto:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Jitsi Desktop», fampiharana loharano misokatra mahaliana sy mahasoa ho an'ny videoconferansa sy resaka, izay mpanjifa amin'ny birao cross-platform ofisialin'ny tetikasa Jitsi; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Jitsi Desktop: Fampiharana an-tsary sy lozisialy an-tsary open source
Tonga ny NetBeans 12.2 miaraka amin'ny fanohanan'ireo fiasa vaovao any Java, PHP ary maro hafa
JetBrains dia mandefa ny Space, sehatra fiaraha-miasa ho an'ny mpamorona sy ny mpamorona